tag ကို: Cisco သည် i- ဆု | Martech Zone
tag ကို: Cisco သည် i- ဆု
Cisco I-Prize Contest တွင်သင့်အားအားပေးအားမြှောက်ပြုသူများအတွက် - Cisco I-Prize Finalists, သင်တို့၏သည်းခံခြင်းကိုတန်ဖိုးထားပြီးသင်ရလဒ်များကိုစိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်နေကြောင်းနားလည်ပါသည်။ သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူတကွထမ်းဆောင်ရန်နှင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မျှကြာရန်သင့်အားတောင်းဆိုရန်လိုအပ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးမှတစ်ဆင့် Cisco သည်အလုပ်လုပ်ရန်အလွန်ကောင်းသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်ပြီးရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ပါသည်။ ငါတို့ဒီမှာရှိ Cisco!
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကောင်းဂျေဆန်၊ ဘီလ်၊ ကာလာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Cisco နှင့်နောက်ဆုံးကျင်းပသော I-Prize တင်ဆက်မှုအတွက်စင်စင်နာတီသို့မနေ့ကကားမောင်းခဲ့သည်။ Carmel စက်ရုံသည်ပိုမိုနီးကပ်စွာရှိသော်လည်း Cisco သည်သူတို့၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအသင်းကိုရောက်ရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလှုံ့ဆော်ရန်လိုအပ်သည်။ ဗိုလ်လုပွဲ! အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲဝင် ၁၁၀၀ ကျော်ဖြင့်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရကာဆီမီးဖိုင်နယ် ၃၂ ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေ့မှောက်၌တင်ပြသောနောက်ဆုံးအတွေးအခေါ် ၁၂ ခုထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်
သောကြာနေ့, ဧပြီ 4, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
မကြာခဏဆိုသလိုအခွင့်အလမ်းတစ်ခုကဲ့သို့သောဤကဲ့သို့ဖြစ်လာခြင်းသည်ဒေါ်လာ ၂၅၀,၀၀၀ နှင့် Cisco ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီနှင့်သင်၏စိတ်ကူးကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာစေရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သင်မဖတ်မီသင့်ထောက်ခံမှုကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာသည်နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်သော်လည်းမဲအပေါ်တွင် မူတည်၍ ပေါ့။ အကယ်၍ မဲပေးခြင်းသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပါကသင်ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မဲပေးခြင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ Cisco's I-Prize Web Site အတွက်မှတ်ပုံတင်ပါ။